I-Pregabalin powder yokwelapha isithuthwane nokukhathazeka | I-powder ye-AASraw
/Blog/I-Pregabalin/Konke Okufanele Ukwazi NgePregabalin
Posted on 03 / 03 / 2020 by 阿斯劳 wabhala ku I-Pregabalin.
I-Pregabalin (148553-50-8) umuthi othengiswa kakhulu ngaphansi kwegama lomkhiqizo i-Lyrica ezifundeni ezahlukahlukene emhlabeni. Kungumuthi olwa nesifo sokuwa obizwa nangokuthi yi-anticonvulsant. Isidakamizwa sisetshenziselwa ukunciphisa imicabango yobuchopho eholela ekubanjweni. Ngakolunye uhlangothi, iPregabalin ithinta amakhemikhali obuchopho athumela amasignali obuhlungu emzimbeni womzimba. Lesi sidakamizwa sisetshenziswa futhi emhlabeni wezokwelapha ukwelapha izinhlungu ezahlukahlukene ezibangelwa izifo ezahlukahlukene ezinjengezinzwa ezibangelwa yi-fibromyalgia, isifo sikashukela, ngisho nezinhlungu zokulimala komgogodla.
I-Pregabalin (148553-50-8) ingasetshenziswa kanye neminye imithi yokusiza ekwelapheni ukuqubuka kokuqala ezinganeni ezineminyaka okungenani emine ubudala kanye nabantu abadala futhi. Sekuyiminyaka eminingi manje, lo muthi udlala indima ebalulekile emhlabeni wezokwelapha, usenza sibe esinye sezidakamizwa ezinamandla kakhulu zokudambisa izinhlungu emakethe. Isidakamizwa kufanele sithathwe kuphela ngaphansi kwencwadi kadokotela ukuthola imiphumela engcono. Kodwa-ke, qiniseka njalo ukuthi uthola iPregabalin kumthengisi noma kumakhi onokwethenjelwa okuzungezile.
E-United States of America, I-Pregabalin kugunyaziwe ukuthi kusetshenziswe ekwelapheni izifo ezinjengokuthi;
Lapha, umthamo wokuqala wePregabalin ngu-165mg okufanele uthathwe kanye ngosuku, futhi kunconywa ukuthi uwuthathe ngemuva kwesidlo sakusihlwa. Kukhona futhi ithuba lokuthi umthamo wenyuswe ngokuya ku-330mg kungakapheli isonto lokuqala lomjikelezo womthamo. Ngemuva kwamasonto amabili noma amasonto omuthi futhi akukho bungcono obubonakalayo ezinhlungwini udokotela wakho angakhuphula isilinganiso sifike kuma-660mgs ngosuku. Lapho ushintsha imithamo, thatha eyasekuseni ukuyikhipha ngokushesha bese uqala umuthi okhipha isikhathi eside ngemuva kokudla isidlo sakusihlwa.
Lapha umthamo wokuqala ngu-75mg uthathwa kabili ngosuku futhi ungashintshwa ube ngu-150mg kabili ngosuku ngosuku lwesonto lokuqala lomthamo. Umthamo ungabuye wenyuswe ngokuya ku-225mg ozothathwa kabili ngosuku. Umthamo omkhulu we-fibromyalgia yi-450mgs kanye nomthamo wesondlo cishe we-300mg kuye ku-450mg. Ngakolunye uhlangothi, ucwaningo lukhombisa ukuthi ukuthatha ama-600mgs ngosuku akunikezi noma yiziphi izinzuzo ezengeziwe zePregabalin kepha kungaholela emiphumeleni emibi kakhulu.
Izinsuku ezimbalwa zokuqala zomthamo zinika udokotela wakho ithuba lokuhlola intuthuko yakho ngaphambi kokunquma ukuthi uzowushintsha yini umthamo phansi noma phezulu. Ucwaningo lukhombisa ukuthi kufanele ulindele imiphumela ezinsukwini ezimbalwa zokuqala zomthamo. I-Pregabalin iyisidakamizwa esisebenza ngokushesha, ngakho-ke kufanele ulindele ukuthi izinhlungu zizokwehliswa ezinsukwini ezimbalwa zokuqala zomthamo. Uma kwenzeka ungatholi lutho olungcono phakathi nesonto lokuqala lokuthatha umthamo wakho, yazisa udokotela wakho ukuthi alungise isilinganiso semiphumela emihle. Imizimba yabantu yehlukile, futhi akukhona okuzenzakalelayo ukuthi uthole imiphumela ngokushesha njengoba abanye bezokwenza. Futhi kuya ngesimo sokuthi ungaphansi kwemithi, imiphumela izohluka. Ezinye ezejwayelekile Imiphumela yePregabalin faka;
Imfihlo yemiphumela yekhwalithi yePregabalin ukufaka udokotela wakho kuyo yonke inqubo yesilinganiso. Musa ukulungisa isilinganiso sePregabalin ngaphandle kokwazisa umuthi wakho. Kangangokuthi ungathenga kalula umuthi ezitolo ezahlukahlukene eziku-inthanethi, ungaqali ukuwuthatha ngaphandle kokuya kohlolwa ngodokotela. Lesi sidakamizwa sibe namandla ekudambiseni izinhlungu ezibangelwa izizathu ezahlukahlukene. Abanye abasubathi basebenzisa iPregabalin ukulawula izinhlungu zemisipha, nezinhlungu zomgogodla, ezivamile ngenxa yokusebenza kanzima nemincintiswano.
6.I-Pregabalin isigamu sempilo
Lesi sidakamizwa esisebenza ngokushesha esisebenza nomuntu osebenzayo I-Pregabalin isigamu sempilo kwamahora we-6. Ngakho-ke, ukuthola imiphumela engcono yePregabalin, imithamo kufanele ihlukaniswe kabili noma kathathu ngosuku. Ukuba yisidakamizwa esidluliselwa ngomlomo, kwenza kube lula kuwe ukuthola imiphumela ngoba usususa isigamu sempilo. Khumbula njalo ukuthi unamathele emiyalweni yemithamo enikezwe udokotela wakho. Noma uthatha umthamo ophansi noma ophakeme kakhulu, isigamu sempilo yalesi sidakamizwa sihlala sinjalo.
Njengezinye izidakamizwa ezisemakethe namuhla, iPregabalin nayo ingakudalula imiphumela emibi uma uyisebenzisa ngokweqile. Ubuningi be- Imiphumela emibi yePregabalin kungumphumela wokusebenzisa kabi noma kwesinye isikhathi lapho uhlelo lwakho lomzimba luphathwa kabi ngomuthi. Kungakho kuhlale kuhlakaniphile ukuthi uqale ngemithamo ephansi, engahle ishintshwe ngemithi yakho ngemuva kokubheka ukuthi umzimba wakho uphendula kanjani emithini. Eminye yemiphumela emibi kakhulu yePregabalin ifaka phakathi;
Izindaba ezimnandi ukuthi yonke le miphumela emibi yePregabalin ingalawulwa uma wazisa udokotela wakho ngesikhathi yize ezinye izimo zizonyamalala ngesikhathi lapho uhlangabezana nemiphumela esezingeni eliphezulu eshiwo ngenhla ungaqhubeki nokuthatha isilinganiso ngaphandle kokwazisa umuthi wakho. Udokotela wakho anganquma ukumisa umthamo uma isimo singalawuleki noma asikisele enye indlela, imithi ephephile kuwe.
Ungakwazi kalula Thenga i-Pregabalin powder ngobuningi noma ngokwanele nje komjikelezo wakho wemithamo ezitolo ezahlukahlukene ze-intanethi noma ekhemisi eliseduze ngoba kusemthethweni ezingxenyeni eziningi zomhlaba. Udokotela wakho uzoba ngumuntu ofanele ukukukhombisa ukuthi uzothenga kuphi. Lokhu kwenza kube lula kuwe ukuthi uthenge futhi usebenzise umuthi ngaphandle kokwesaba ukungqubuzana nomthetho.
Uma ubheka ukubuyekezwa okuhlukahlukene kwePregabalin, kuyacaca ukuthi abasebenzisi abaningi banelisekile ngemiphumela abayitholayo ngemuva kokudla umuthi. IPregabalin isetshenziswa njalo njengesidakamizwa esidambisa izinhlungu, futhi ibilokhu ithola impendulo enhle evela kubasebenzisi abaningi. Abaphenyi bezokwelapha nabo bafaka okutholakele okwahlukahlukene, futhi yingakho i-FDA ivume ukuthi isetshenziswe ekwelapheni i-Epilepsy, Post-herpetic neuralgia noma izinhlungu ezenzeka ngemuva kokushaywa ngamakhanda, ubuhlungu besifo sikashukela kanye ne-Fibromyalgia.
Umhlaba uyashintsha, futhi namhlanje, ungakwazi thenga uPregabalin online epulatifomu yethu ngentengo engabizi. Iwebhusayithi yethu iyasebenziseka kalula, okwenza kube lula ngawe ukuthi usuke komunye umkhiqizo uye komunye futhi wenze i-oda lakho ngemizuzwana. Ungangena kwiwebhusayithi yethu nge-smartphone yakho, ithebhulethi, noma i-laptop yakho. Ngaphezu kwalokho, senza ukulethwa emhlabeni wonke nangesikhathi esifushane kakhulu. Ungathenga iPregabalin ngobuningi noma nje ngokwanele umjikelezo wakho wesilinganiso.
Singabahlinzeki abahola phambili bePregabalin esifundeni, futhi amanani ethu angabizi kakhulu awalimazi ikhwalithi yemikhiqizo yethu. Sinikela ngemikhiqizo yezokwelapha esezingeni eliphezulu esitolo sethu esiku-inthanethi. Kodwa-ke, sihlala seluleka wonke amakhasimende ethu ukuthi aqinisekise ukuthi ayahlolwa ngaphambi kokuba aqale ukuthatha imikhiqizo yethu. Imikhiqizo yethu yezokwelapha ingaholela emiphumeleni emibi lapho isetshenziswe kabi noma ngokweqile. I-Pregabalin iyathengiswa iyatholakala nasekhemisi lakho eliseduzane kepha qiniseka ukuthi uyithola kumthengisi othembekile. Akuzona zonke izitolo zezokwelapha eziku-inthanethi noma ezibonakalayo ezinikela ngemikhiqizo esezingeni.
Kodwa-ke, iPregabalin (148553-50-8) ayikavunyelwa ukwelashwa kokukhathazeka e-US, yize kunemibiko yokuthi abanye abasebenzisi bayayisebenzisa ngaphandle kwelebula ukulawula isimo. Kwezinye izingxenye zomhlaba njengaseYurophu, iPregabalin yamukelwe ekwelapheni ukukhathazeka kubantu abadala. Kunemibiko engaqinisekisiwe yokuthi iPregabalin ingasetshenziswa ukulawula ukudangala. Ngeminye imininingwane ngePregabalin, xhumana nodokotela wakho noma uthintane nosokhemisi wakho.
UKim, SC, Landon, JE, noSolomon, DH (2013). Izici zomtholampilo nokusetshenziswa kwemithi phakathi kweziguli ze-fibromyalgia ezisanda kunikezwa i-amitriptyline, i-duloxetine, i-gabapentin, noma i-pregabalin. Ukunakekelwa kwe-arthritis nokucwaninga, 65(11), i-1813-1819.
IGoodman, CW, neBrett, AS (2017). IGabapentin ne-pregabalin yezinhlungu-kuyakhuphuka kuchaza isizathu sokukhathazeka?. I-New England Journal of Medicine, 377(5), i-411-414.
ILam, DM, Choi, SW, Wong, SS, Irwin, MG, & Cheung, CW (2015). Ukusebenza kwePregabalin ezinhlungwini ezinzima zangemva kokuhlinzwa ngaphansi kwezigaba ezahlukahlukene zokuhlinzwa: ukuhlaziywa kwe-meta. Medicine, 94(46).
UBaldwin, DS, Ajel, K., Masdrakis, VG, Nowak, M., & Rafiq, R. (2013). I-Pregabalin yokwelashwa kwesifo sokukhathazeka okujwayelekile: isibuyekezo. Isifo se-Neuropsychiatric kanye nokwelashwa, 9, 883.
I-Primo (i-Methenolone Acetate) enye ye-steroid e-anabolic ephephile kakhulu yabesifazane
Ingabe abesifazane bangathatha i-Primobolan (i-Methenolone Acetate)?
I-Primobolan iyi-steroid ye-anabolic esetshenziselwa kakhulu ekusika imijikelezo ye-steroid
Ngabe u-Orlistat usebenza kanjani njengomuthi wokulahlekelwa kwesisindo? "Umthombo Wentsha": i-NAD + ne-NMN njenge-Supplement